Wararka - Tayada caaryada tuurista dhinta ayaa aad muhiim u ah
Tayada dhintaan-jilicsanaan caaryada waxaa ka mid ah dhinacyada soo socda:
(1) Tayada aluminiumka aluminium-ka-dhimista qaybo-dhimista: xasilloonida cabbirka iyo waafaqsanaanta qaybaha aluminiumka aluminium-ka-dhimista, jilicsanaanta dusha sare ee qaybaha shubka, heerka isticmaalka aluminium aluminium, iwm.;
(2) Waqtiga nolosha: marka la eego dhismaha hubinta tayada aluminiumka aluminium-ka-dhimista qaybaha, tirada wareegyada shaqada ee caaryada dhinta-dhimista ay dhamaystiri karto ama tirada qaybaha aluminium aluminium-ka-dhimista ee la soo saaro;
(3) Isticmaalka iyo dayactirka caaryada tuurista: Hadday tahay tan ugu habboon in la isticmaalo, si sahlan loo dumiyo, iyo wakhtiga kaalmaynta wax-soo-saarka sida ugu gaaban ee suurtogalka ah;
(4) Qiimaha dayactirka, dayactirka xilliyeedka, iwm.
Siyaabaha aasaasiga ah ee lagu wanaajin karo tayada caaryada tuurista:
1. Naqshadeynta qashinka aluminium aluminium-ku-dhimista waa inay noqotaa mid macquul ah, iyo qorshaha qaab-dhismeed ee ugu fiican waa in la doortaa sida ugu macquulsan. Naqshadeeyuhu waa inuu tixgeliyo shuruudaha farsamada ee aluminiumka aluminiumka dhinta qashinka iyo qaab-dhismeedkoodu waa inuu buuxiyaa habka iyo suurtogalnimada wax-soo-saarka caaryada.
2. Naqshadeynta caaryada-dhimista ayaa ah tallaabada ugu muhiimsan ee lagu hagaajinayo tayada caaryada. Waxyaabo badan ayaa loo baahan yahay in la tixgeliyo, oo ay ku jiraan xulashada alaabta caaryada, isticmaalka iyo badbaadada qaab dhismeedka caaryada, mashiinnada qaybaha caaryada iyo ku habboonaanta dayactirka caaryada. , Kuwani waa in loo tixgeliyaa sida ugu macquulsan ee ugu macquulsan bilowga naqshadeynta.
① Doorashada alaabta caaryada
Si loo daboolo shuruudaha macaamiisha ee tayada badeecada, sidoo kale waa lagama maarmaan in la tixgeliyo qiimaha alaabta iyo xooggeeda gudaha muddada go'an. Dabcan, walxaha waa in lagu doortaa iyadoo loo eegayo arrimo ay ka mid yihiin nooca caaryada, habka shaqada, xawaaraha socodsiinta, iyo hababka fashilka ugu weyn. Sababtoo ah caaryada dhinta-dhimista waxay la kulmaa cadaadis kulaylka wareegtada ah, walxaha leh sifooyinka daalka kulaylka xooggan waa in la doortaa; marka wax-shubashadu ay ku badan yihiin dufcadaha, birta la demiyay iyo kuwa dabcay ayaa la dooran karaa. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la tixgeliyo isticmaalka walxaha caaryada leh ee leh xiriir yar oo leh dhejisyo si looga hortago caaryada ku dheggan inay sii xumeeyaan xirashada qaybaha caaryada, taas oo saameynaysa tayada caaryada.
②Marka qaabka caaryada la nashqadeeyo
Isku day inaad noqoto mid isku xidhan intii suurtogal ah, si sahlan loo shaqeeyo, oo hubi in qaybaha caaryada ay leeyihiin xoog iyo qallafsanaan ku filan; marka qaab-dhismeedka caaryada uu ogolaado, geesaha dusha kasta oo ka mid ah qaybaha caaryada waa in loo qaabeeyaa sida isbeddelka wareegsan ee suurtogalka ah si looga fogaado xoojinta cadaadiska; Godka iyo qayb ka mid ah feerarka iyo xudunta ayaa la isku soo ururin karaa ama qaab-dhismeedyo go'an si loo baabi'iyo xoogga saarista. Feeryo caato ah ama xudunta, tallaabooyinka ilaalinta ku habboon waa in lagu qaadaa qaabdhismeedka; Haddii shaabada qabowgu u dhinto, waa in loo qaabeeyaa si looga hortago qaybo ama qashinka Aaladaha xannibay (sida biinanka ejector, hawada cufan, iwm.). Isla mar ahaantaana, waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la tixgeliyo sida loo yareeyo saameynta tayada caaryada ee ay keento xirashada qalabyada silbashada iyo qaybaha saameynta soo noqnoqda inta lagu jiro isticmaalka muddada dheer.
③Naqshadda, baaxadda kala dirida iyo isu-ururinta waa in la yareeyaa marka la hagaajinayo qayb gaar ah, gaar ahaan marka qaybaha xidhashada la beddelo, baaxadda kala dirida iyo isu-ururinta waa in la yareeyaa intii suurtagal ah.
3. Habka wax soo saarka caaryada
Sidoo kale waa qayb muhiim ah si loo hubiyo tayada caaryada. Habka habaynta iyo saxnaanta hab-socodka habka wax-soo-saarka caaryada waxay sidoo kale saameyn doontaa nolosha adeegga caaryada. Saxnaanta qayb kasta waxay si toos ah u saameynaysaa isu-ururinta guud ee caaryada. Waxa intaa dheer in saxnaanta qalabka laftiisa, waxaa lagama maarmaan ah in la hagaajiyo habka processing ee qaybaha iyo hagaajinta heerka farsamo ee fitter ee shiidi caaryada iyo habka u dhigma si loo hagaajiyo saxnaanta processing ee qaybaha caaryada; Haddii saameynta guud ee caaryada caaryada aysan buuxin shuruudaha, suurtogalnimada samaynta caaryada u guurto xaalad aan caadi ahayn ee qaabka tijaabada ah ayaa kordhin doonta, taas oo saameyn weyn ku yeelan doonta tayada guud ee caaryada. Si loo hubiyo in caaryada ay leedahay saxsanaanta asalka ah ee wanaagsan, habka wax soo saarka, habka saxda ah ee saxda ah ee macquulka ah, sida dheecaanka korantada, goynta fiilada, mashiinka CNC, iwm, waa in marka hore la doortaa. Isla mar ahaantaana, fiiro gaar ah waa in la siiyaa saxnaanta caaryada, oo ay ku jiraan saxnaanta machining ee qaybaha caaryada saxnaanta Golaha iyo kormeerka dhamaystiran ee saxnaanta caaryada iyada oo loo marayo shaqada aqbalida tijaabada caaryada. Inta lagu jiro kormeerka, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo qalabka cabbiraadda saxda ah inta ugu badan ee suurtogalka ah. Qaybaha caaryada leh ee dusha adag iyo qaab dhismeedka qaloocan, toosannada caadiga ah iyo kaararka vernier lama isticmaali karo. Si loo helo xogta cabbirka saxda ah, qalabka cabbiraadda saxda ah sida qalab cabbir saddex-isku-duwan waa in la doortaa si loo hubiyo saxnaanta xogta cabbirka.
4. Xoojinta dusha sare ee qaybaha ugu muhiimsan ee caaryada
Si loo hagaajiyo xirashada dusha sare ee caabbinta qaybaha caaryada, si loo hagaajiyo tayada caaryada. Xoojinta dusha sare, hababka xoojinta kala duwan waa in lagu doortaa iyadoo loo eegayo qaababka isticmaalka kala duwan.
5. Isticmaalka saxda ah iyo dayactirka caaryada
Sidoo kale waa arrin muhiim u ah hagaajinta tayada caaryada.
Tusaale ahaan: rakibidda caaryada iyo hababka debugging waa in ay ahaataa mid ku habboon, marka la eego orodyahannada kulul, fiilooyinka korontada waa inay noqdaan kuwo sax ah, wareegga biyaha qaboojinta waa in ay buuxiyaan shuruudaha naqshadeynta, iyo xuduudaha mashiinka wax lagu dhejiyo, mashiinka dhejiska dhinta, iyo in la cadaadiyo wax soo saarka caaryada waa in ay buuxiyaan shuruudaha naqshadeynta iyo qaar kale oo badan.
Markaad si sax ah u isticmaalayso caaryada, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dayactir joogto ah oo ku saabsan caaryada. Boorarka hagaha, gacmo-gacmeedka hagaha iyo qaybaha kale ee caaryada waa in lagu buuxiyaa saliid saliid ah si joogto ah. Caaryada shubka-dhimista waa in la saliidiyo ama la qaadaa ka hor inta aan la samayn caaryar kasta. Wakiilka caaryada waxaa lagu buufiyaa dusha sare ee qaybta la sameeyay. Dayactirka ilaalinta qorshaysan ee caaryada iyo habka xogta ee habka dayactirka ayaa ka hortagi kara dhibaatooyinka suurtagalka ah ee wax soo saarka caaryada iyo hagaajinta waxtarka shaqada dayactirka.